अन्य अवसरको पछि लाग्दिन, चौबिसै घन्टा व्यवसायीको सेबक बन्छुः अधिकारी (अन्तर्वार्ता) – Arthik Awaj
अन्य अवसरको पछि लाग्दिन, चौबिसै घन्टा व्यवसायीको सेबक बन्छुः अधिकारी (अन्तर्वार्ता)
By आर्थिक आवाज २०७५ आश्विन ४ गते बिहीबार ०७:०२ मा प्रकाशित
अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, ३२औं महाधिवेशन
निजी क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२औं महाधिवेशन असोज ५ र ६ गते हुँदैछ । चुनाव मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरु घरदैलोमा व्यस्त छन् । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार दामु अधिकारी व्यावसायिक समावेशी समूह बनाएर चुनावी अभियानमा छन् । यसैक्रममा चुनावी अभियान, उम्मेदवारीका कारण, प्रतिबद्धता तथा एजेण्डा लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अधिकारीसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीको सारः
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि घरदैलो गर्ने क्रममा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
मैले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएको छु । उम्मेदवारी घोषणा र मनोनयन दर्तादेखि नै मलाई हौशला मिलेको छ । व्यवसायीले हामी तपाईंको टिमलाई सहयोग गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनुभएको छ । धेरै भन्दा धेरै व्यवसायीले नेतृत्वमा दामु अधिकारी आउनुपर्छ भन्नु भएको छ । नेतृत्वमा आउछु भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । उमेदवारी घोषणा पछि मैले उद्योगी व्यवसायीको बिचमा घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेको छु । मलाई आत्मविश्वास पनि बढेको छ । साथ र सहयोग प्राप्त गरिरहेको छु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गर्नेछु । सवै व्यवसायीलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले काम गर्नेछु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यावसायिक र उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । व्यवसायी तथा उद्योगीको हकहितमा लाग्नेछु र समस्या समाधानमा पहलकदमी गर्नेछु ।
समावेशी व्यावसायिक समूह भन्नुभएको छ । टिम पूर्ण समावेशी छ ?
केही व्यवसायीले टिमलाई अझै समावेशी बनाउनुपर्ने भन्ने सल्लाह पनि दिनुभएको छ । २१ जनाको टिम बनेर आएका छौं । निवर्तमान अध्यक्ष सहित २९ सदस्यीय कार्य समिति बन्छ । अरु टिम बनाएर जाने बेलामा हामी समावेशी टिमलाई पूर्ण समावेशी बनाउनेछौं भन्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । व्यावसायिक क्षेत्र, व्यवसायीले तिर्ने राजस्व लगायत हरेक हिसाबले समावेशी बनाएका छौं । यसलाई अझ सबै हिसाबमा समावेशी बनाएर पूर्णता दिनेछौं । यो टिम समावेशी तथा व्यावसायिक बनेकोछ र उद्योगी व्यवसायीको हकहितमा काम गर्छ भन्ने समस्त उद्योगी व्यवसायीलाई पनि विश्वास छ । टिममा युवा जोश र जाँगर भएका व्यवसायी मित्रहरु हुनुहुन्छ ।
संघको चुनावमा राजनीति बढ्यो भन्छन्, कुरा के हो ?
कतिपयले हामीलाई राजनीतिक लाञ्छना लगाएपनि हामी व्यावसायिक हिसावमा लागेका छौं । राजनीतिक आस्था सबैको हुन्छ, तर त्यसलाई भन्दा व्यवसायलाई महत्वपूर्ण ठानेका छौं । हाम्रो टिममा राजनीतिकर्मी कोही पनि छैनौं । व्यवसायी मात्र हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ । कागजी रुपमा मात्र व्यवसाय गरेका साथीहरु मेरो टिममा कोही हुनुहुन्न । जसले व्यवसाय गर्छ त्यसलाई नै व्यवसायीको पीडा थाहा हुन्छ । त्यसले नै उद्योगी व्यवसायीको हकहितका निम्ती आवाज उठाउन सक्छ भन्ने सोचेर नै उद्योगी व्यवसायीले मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ निजी क्षेत्रको छाता संस्था हो । संघभित्र राजनीति हुन दिनुहुँदैन ।
संघको अबको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
२०११ सालमा तत्कालीन व्यापार संघको नाममा स्थापना भएको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको इतिहास लामो छ । विकास निर्माणका काममा यसले ठुलो योगदान पु¥याएको छ । अहिले देश संघीय ढाँचामा गइसकेको छ । ३ तहका सरकार छन् । अब पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका विकास निर्माणका निम्ती साझेदारीको रहनेछ । राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा आयोजनाका काम ओझेलमा परे भने तथा ढिलासुस्ती भएमा समस्या आइपरेमा त्यस्ता बाधा अड्चन फुकाउन तथ काम समयमा नै सम्पन्न गर्न दवाव दिने काम पनि गर्नेछौं । व्यवसायमुखी भएर हामी लाग्नेछौं । आम उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीका धेरै समस्या छन् । कर, बैंक व्याजदर, पार्किङ, घरभाडा लगायतका समस्या छन् । यस्ता समस्याका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन तथा स्थापित हुन सकेका छैनन् । सबै समस्या समाधान गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । व्यवसायी तथा उद्योगीका समस्या समाधान गर्नै जिम्मा अबको उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वको हो । हामी समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनेछौं । सरकारले तोक्ने कर उद्योगी व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । सरकारले आफ्नो ढङगले कर तोक्नु हुँदैन । कमाएको पैसाले कर तिर्ने हो । पैत्रिक सम्पत्ती वेचेर कर तिनुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्नुहुँदैन ।
अध्यक्षमा तपाईंलाई मतदान किन ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा ३ कार्यकाल सदस्य भएर काम गरिसकेको छु । अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । अप्रत्यक्ष रुपमा पनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नजिक रहेर धेरै काम गर्दै आइरहेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । अहिले म महासचिव भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मलाई प्रदान गरिएका जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरेको छु । व्यवसायीको मन जित्ने काम गरेको छु । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको गरिमा उच्च बनाउने काम गरेको छु । मेरा अनुभवलाई संस्थागत गर्नका निम्ती अध्यक्षमा आम उद्योगी व्यवसायीको साथ पाउनेछु । सबैको मन जितेर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ जुन व्यवसायीको पवित्र मन्दिर हो यसलाई व्यवसायीमैत्री संस्था बनाउन लाग्नेछु ।
चुनावमा व्यावसायिक भन्दा बढी विकास निर्माणको एजेण्डा बढी देखिएको हो ?
करिव २ दशकसम्म स्थानीय सरकार भ्याकुमको रुपमा रहिरहँदा उद्योग वाणिज्य संघबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिले निर्वाचित प्रतिनिधिका हिसावले धेरै काम गर्नुपर्दथ्योे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमा विकास निर्माणका काम पनि धेरै भएका छन् । विभिन्न शैक्षिक संस्था स्थापना लगायत विकास निर्माणका काममा महत्वपूर्ण भुमिका छ । विकास निर्माणका कममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ टाढा पनि रहँदैन । अहिले नेपालमा ३ तहका सरकार छन् । विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधि लाग्नुहुन्छ । हामी व्यावसायिक प्रतिनिधी व्यापार व्यवसाय कसरी दीगो बनाउने र कसरी विकास गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नेछौं । जसले रोजगारीको सृजना पनि हुनेछ । हामी अब धेरै विकास निर्माणका एजेन्डा जोड्दैनौं । व्यावसायिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन्छौं । व्यवसायीको समस्या समाधानमा लाग्नेछौं । लगानीमैत्री वातावरणका लागि पहल गर्नेछौं । आवश्यक परेको खण्डमा सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं भने आम उद्योगी व्यवसायीको साथमा दबाबका कार्यक्रम पनि गर्न पछि पर्नेछैनौं ।
म राजनीतिकर्मी होइन । कुनै पार्टीमा आस्था राख्नु स्वभाविक हो । राजनीतिक पार्टीको कुनैपनि पदमा बसेर काम गरेको छैन । पार्टीको झण्डामुनी बसेर चुनाव लडेको व्यक्ति म होइन । म निर्वाचनमा होमिसकेपछि जसले समर्थन गर्नुहुन्छ उहाँँहरुको समर्थनलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्छ । म पार्टीको दवाावमा निर्वाचनमा आएको होइन । म निर्वाचनमा आएपछि उहाँहरुले सर्मथन गर्नुभएको हो । मलाई प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक दुवै धारका उद्योगी व्यवसायीको राम्रो साथ र समर्थन छ । अध्यक्ष भएर दुई वर्ष पुरै तपाईंहरुकै सेवामा समर्पित हुनेछु भनेर मैले मेरा मतदातामाझ प्रतिबद्धता पनि गरेको छु । संघको अध्यक्ष हुँदा अन्य जस्तासुकै अवसर प्राप्त भएपनि म व्यवसायीकै सेवक भएर बस्नेछु । चौविसै घन्टा संघको हकहितमा लाग्नेछु ।